Liis dhameystiran oo ah loogula YouTube Hotkeys
Haddii aad tahay baradhada shabag, oo aan la aqoon leh YouTube, oo waa il weyn oo xiiso leh iyo farax, sida ilmaha lagu qoslo, bisadaha funny, funny videos qoob ka ciyaarka iyo inta ka badan waxaad noqon kartaa. Si aad uga dhigto sahlan si aad u daawato YouTube videos, hotkeys YouTube waa inay noqdaan xal kaamil ah si ay u xakamayso si wanaagsan u videos on YouTube. Bal aan iyaga ka soo hubi mid mid.
Fiiro gaar ah: In si dhan tuuryo keyboard ay u shaqeeyaan video ah, waxaan u baahan nahay oo dhan diiradda on video ah. Taasi waxay u baahan tahay in aad riix badhanka hako oo ku saabsan ciyaaryahanka video ah oo mar kale guji in ciyaarta video ah.
Hako oo furmaya Videos
Hawlgalka ayaa ugu caadiga ah videos noqon doonaa inay yara hakadaan oo dib u bilaabi video ciyaareed. Tan waxaa lagu guulaysan karaa iyada oo xukunka ka dib.
Hako video ah, mar kale riixi in dib loo bilaabo
Horay iyo dib u dhaqaaji Videos
Gacanta wanaagsan sida YouTube video tagaa, inaad marwalba u baahan tahay in la ogaado tuuryo keyboard, kuwaas oo ay u guuraan videos Weeraryahanka iyo gadaal.
Weeraryahanka Fast (5 sec waqti a)
Fast u socdeen (5 sec waqti a)
Weeraryahanka Fast (10 sec waqti a)
Fast u socdeen (10 sec waqti a)
U bood 10%, 20%, ... ... video
Videos in bilowgii ama End dhaqaaq
Waxaa jirta waddo dadka si degdeg ah ay u guuraan videos in bilowgii iyo sidoo kale dhamaadka. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in ay ka mid button ku riixi doonaa keyboard siday u kala horreeyaan.
Dhaqaaq bilowgii video ah
Dhaqaaq dhamaadka video ah
Marka riyaaqayaa YouTube videos, waa wax aad looga xumaado ah in aad isticmaasho jiirka si loo xakameeyo mugga. Halkan waa hab fiican.
Kor u qaadaysaa codka 5%
Mugga hoos u soo celi 5%
Mar walba waa ay wanaagsan si aad u daawato videos in shaashad buuxda. Eeg sida loo sameeyo iyada oo tuuryo keyboard.
Beddel ciyaaryahan video shaashada Buuxa
Ka bixidda shaashad buuxda oo caadi ah dib u
Nafta Video ah
Mararka qaarkood, waxaa jiri doona dhibaato loo maqli karo video ah. "Nafta", si kastaba ha ahaatee, inta badan si deg deg ah uu xalinayo dhibaatada.
Nafta video ah in ay mar kale ku shuban
Dhaqaaq Track kale oo playlist A
Waxa ay noqon doontaa waqti dheer la sugi isbedelka track in playlist ah iyo sidoo kale gumaarka ah in guji jiirka. Xaaladahaas oo kale, hotkeys kuwaas oo kaa caawin doona.
Dhaqaaq track hore ee playlist ah
Tag dhamaadka video ah oo ku shuban track soo socda ugu dhaqsaha badan
Button Tab on keyboard waa awood ku filan in aad ka mid ah fursadaha differnt beddelaan. Riix muhiim ah Tab ay ku boodaan si ikhtiyaar aad rabto oo guji gala marka aad go'aan ka gaarto waxa aad rabto. Waxaa jira 7 fursadaha ciyaaryahanka YouTube ah.
1 Play ama xasil (riix gala in la xakameeyo)
2 Gacanta Volume (furayaasha Press kor / hoos arrow si loo xakameeyo)
3 Watch Later (riix gala u badbaadin Watch Later playlist)
4 Qoraalka (riix gala iyo isticmaalin furaha Tab in ay ku boodaan si ay wax kasta, idinkoo ku comfirm)
5 Settings (riix gala iyo isticmaalin furaha Tab in ay ku boodaan si ay wax kasta, idinkoo ku comfirm)
6 Player Hab (riix gala in ay ku boodaan si ay ciyaaryahanka xuddun ama ciyaaryahan Default)
7 Screen Full ((riix gala in ay ku boodaan si shaashad buuxda iyo ESC uga baxdo)
> Resource > YouTube > ugu badan ee Version of YouTube Hotkeys